Kusvira SHELLY kaCollege Student - Ndakamuzvambura Nayo muShower - Page 3 of 4 - Masasi eHarare
DzeBonde Kusvira SHELLY kaCollege Student – Ndakamuzvambura Nayo muShower
Kusvira SHELLY kaCollege Student – Ndakamuzvambura Nayo muShower
We said our good bye ndikadzokera back to college for my last late lecture. Ndaka muinviter for movie the next day and this is where I was going to make my first move yekubata mazamu ake just kuti ndizive kuti munhu akaita sei, akabvama tikabva taenda and tikagara kutop corner kwekuti vanhu would not see anything if they are concentrating on the movie.
Ndakaisa ruoko rwangu padumbu akabva aribvisa and I expected that but ndakaramba ndizama kusvika ndaona munhu adaira, ndakamubata mazamu ake slowly ndikatanga kumukisa ndibatabata mathighs ake slowing moving ruoko rwangu kubeche rake. Magariro atainge takaita ndaigona kungomugarisa pamakumbo ndikasvira asi ndakazviudza kuti if we did this then ndaizomusvira later. Shelly ainge atota manje anzwa nezemo asi ainyara , but told myself ndamuisa pacorner pandaida.
Nezvainge zvaitika mumovie takaenda kumba and she wasn’t talking and I dropped her off, next day handina kana kumufonera kana kutumira sms I wanted her kuti atange kunditsvaga iye. Ndainge ndakaisa phone yangu on silent ndirimu lecture, after the lecture ndakaona ndine more than 20 missed calls and I ignored them. Ndasvika kumba late Friday ndakaziva kuti even if i return her calls ainge asingakwanise kuuya or me kuenda kunomuona that night, ndakamufonera apa ndakanzwa voice rake kuti ainge akatsamwa I apologised ndaikati ndanga ndakanganwa fone kumba today but I will make it up to her tomorrow Saturday.
Ndakamubvunza If she wanted kuuya kumba kwangu or inini to go kwake, she said she was comfortable if I came kumba kwake. Ndakaita zvekumukira zvekuti ndakasvika around 8:30 am ndikawana asati ageza and i had brought breakfast. When I knocked she was shocked akangoti aaah this early ndikati ndainge ndauya nebreakfast to apologise more, akasekerera achindichurira door ndikabva ndapinda.
Aigara muOne bedroom bachelors flat so akandisiya mulounge akambodzokera mubedroom achiti aida kutora her towel kuti ageze first before breakfast. Ndakafara ipapo coz I knew kuti ndaigona kusvira mubathroom first before kumwe kwese. Ndakamirira kuti apinde mubathroom then I followed to keep her company ndakatanga kutaura naye achigeza behind the the bathroom curtain, ndakangoti can I join you akaseka wena kuita kunge ndataura joke. Akati ndosaka wauya muno kuti undisvire mubathroom ini ndikati aaahhh noooo, but she knew ndainyepa.